नेपाल आज | मोनोरेल चलाउन सधै अनुदान दिनुपर्छ (भिडियोसहित)
मोनोरेल चलाउन सधै अनुदान दिनुपर्छ (भिडियोसहित)
आशिष गजुरेल, नेपालका यातायात तथा ट्राफिक इञ्जिनियर हुन् । उनले विभिन्न तथ्य र प्रमाण दिएर काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा धारणा राख्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको बोलीमै मोनोरेल झुण्डिएको छ । तर यो विषयका विज्ञ गजुरेलले भने मोनोरेल उपत्यकाका लागि उपयुक्त नरहेको प्रमाण पेश गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँग भएको कुराकानीको मुख्य मुख्य अंशहरुः
काठमाडौंमा मोनोरेल चलाउने भनेर डिपिआर बनाउने सम्झौता भएको छ । तर तपाईंहरु जस्तै विज्ञहरुले मोनोरेलमा शंका गरिरहनु भएको छ । किन ?
यसलाई दुई दृष्टिले हेर्नु पर्छ । मोनोरेल हुँदा पनि केही बिगार्ने नै चाहिँ होइन । अर्कोतर्फ टेक्निोलोजीको विकास र मोनोरेलको भविष्य हेर्दा चाहिँ यो उपयुक्त हुँदैन कि भन्ने लाग्छ । सहरी वा अबन रेलमा जानु त पर्छ । तर मोनोरेलको विगत हेर्ने हो भने लामो रुटमा मोनोरेल सञ्चालन भएको इतिहास छैन । बढीजसो मोनोरेल एसियामा चलेका छन् । सबैभन्दा लामो मोनोरेल ३० किलोमिटर लामो रहेछ । बाँकी छोटाछोटा केही छन् । केही मोनोरेल त बन्द नै भएका छन् । मास ट्रान्जिटका रुपमा मोनोरेल कतै पनि सफल छैन । जर्मनीको भुपाताल भन्ने सहरमा मोनोरेल चलेको छ । त्यो पनि १३ किलोमिटर मात्रै लामो छ । त्यो बाहेक मेट्रो धेरै सफल छ । मोनोरेल प्राविधिक दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन । मलेसियामा पनि जम्मा ८ किलोमिटर मात्रै छ । भारतको मुम्बइमा त अनुपयुक्त, बढी खर्चिलो भनेर बन्द नै गरियो ।
त्यसकारण मोनोरेल काठमाडौं चक्रपथका लागि उपयुक्त छैन भन्ने मेरो मत हो ।
चिनियाँहरुले विश्वलाई चकित पारिदिने रेल चलाएका छन् । मोनोरेल पनि चलाउन सक्लान् नी ?
अहिले जतिसम्म समाचार पढेका छौं, मेयरका जति पनि कुरा सुनेका छौं, त्यसमा मोनोरेलका लागि कसले लगानी गर्ने भन्ने ठोस कुरा आएको छैन । उहाँले नेपालको स्रोतबाट रेल चलाउने कुरा सम्भव छैन । निजीले चलायो भने पनि सरकारले अनुदान दिनु पर्छ । सिंगापुर, जापान र भारतमा बाहेक मेट्रो रेलसमेत नाफामा छैन । मोनोरेलमा विदेशीले अनुदान दिएर बनाइदिनेवाला छैनन् । नेपालमा पनि मोनोरेल फाइदामा चल्दैन । सधैभर अनुदान दिइरहनुपर्छ । नत्र मेट्रोरेल वा मोनोरेल चल्नेवाला छैन ।
काठमाडौंमा मोनोरेल चल्दा ट्राफिक समस्या समाधान हुन्छ ?
सीधा जवाफ– हुँदैन । तर भुँईमा चल्ने बसका यात्रु मोनोरेलमा खम्बा खम्बा जाने हुन् । त्यसकारण केही ट्राफिक त कम हुन्छ । चक्रपथमा मोनोरेल बनाएर काठमाडौं सबैतिरको जामको समस्या समाधान हुँदैन । काठमाडौं उपत्यकामा करिब १७ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल छ । करिब १२ लाख सवारी साधन चल्छन् । यो अवस्थामा एउटा चक्रपथमा मोनोरेल चलाएर छलाङ मार्नेगरी ट्राफिक व्यवस्थापन हुने होइन ।
११६ अर्ब लगानी गरेर अलिकति ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नु बुद्धिमानी हो ?
– जाइकाले पनि एक अध्ययन गरेको थियो । जाइकाले अध्ययन गरेर काठमाडौं उपत्यकाको सहरी पूर्वाधारबारे प्रतिवेदन २०१७ मा सरकारलाई बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा पूर्वमा धुलिखेल, पश्चिममा नागढुंगा, उत्तरमा नारायणगोपाल चौक र दक्षिणमा गोदावरी चल्ने रेल चलाउन सकियो भने काठमाडौंमा चाप कम हुने सुझाव दिएको थियो । अनि रिङ रोडमा बस र्यापिड ट्रान्जिट सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमा रिङ रोडमा दुई लेन डेडिकेटेड बनाउने र त्यसमा फटाफट चल्ने बसमात्रै गुड्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने अहिलेको ट्राफिक समस्याको समाधान चाँडै हुने सम्भावना छ । यति गर्न सकियो भने काठमाडौंको यातायात व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
सडक चौडा बनाउँदा त काठमाडौंबासीको चर्को विरोध सहनु पर्यो भने फेरि मेट्रो रेल बनाउने भन्दा अरु समस्या नहोला ?
मेट्रो जमिनमुनी पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । धुलिखेल देखि नागढुंगासम्मको कुरा जाइकाले गरेको छ । त्यहाँ त जमिनको समस्या छैन । जहाँ जमिनको समस्या छैन, त्यहाँ सतहमा चलाउने, जहाँ जमिनको समस्या हुन्छ, त्यहाँ जमिन मुनी चलाउने हो भने समस्या हुँदैन । प्राविधिक हिसाबले काठमाडौंमा सम्भव छ । दिल्लीमै पनि घनावस्ती भएका ठाउँमा मेट्रो भूमिगत छ ।
तर दिल्लीमा त जनसंख्या बढी छ । काठमाडौंमा कम छ । कसरी हुन्छ ?
हैन । काठमाडौंमै पनि अब ६० लाख जनसंख्या पुगिसकेको छ । यति ठूलो जनसंख्याका लागि अब मास ट्रान्जिट चाहिहालेको छ । १२ लाख सवारी साधन उपत्यकामा चल्छ । २० प्रतिशत बर्सेनि चल्छ । अनि अब यति ठूलो जनसंख्यालाई बसले मात्रै धान्दैन । सार्वजनिक सवारी गतिला नहुँदा मानिसमा निजी मोटर किन्ने चाहना जागृत भएको छ ।
नेपालमा त छिमेकी चीनले बनाइदिएको ट्रली बस आज सञ्चालन गर्नेहरुले नै हजम गरिदिए । अब फेरि मोनोरेलमा त्यस्तै नहोला भन्ने के छ ?
विगतमा ट्रली बस खाए भनेर अब पनि नबनाउने भन्ने हुँदैन । नेपाल सरकार वा स्थानीय सरकारले मोनोरेलबारे फाटफुट छलफल गरेको छ । हामीलाई पनि सरकारी निकाय, नीतिनिर्माताले हामीसँग छलफल गरेका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यसबारे सोच्नु पर्छ । एकीकृत विकासको योजना नै छैन ।
कतै सिटामोल खान नपाउने स्थिति छ, कतै विवादास्प योजनामा अर्बौं खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्छ ?
यस्तो छ, विकासको कुरामा यस्तै हुन्छ । तराईमा, काठमाडौंमा रेल अहिलेसम्म चलेको छैन । किन जाजरकोटका जनताले सिटामोल पाएनन् ? भोलि रेल चलेपछि पनि नपाउने भन्ने के होला र ? रेल चलेपछि पनि सिटामोल पाउन सक्छन् । विकासको मामिलालाई यसरी जोडेर अर्थ लगाउन हुँदैन । यो विषयलाई क्रमैसँग सम्बोधन गर्नुपर्छ । मास्टर प्लान महत्वपूर्ण हुन्छ । खर्च कसरी जुटाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । चक्रपथका लागि कुन प्रणाली उपयुक्त भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । मोनोरेलको सञ्चालन खर्च मुम्बईमा त धानिएन भने हामी कसरी धान्न सक्छौं होला ? यसमा नीति निर्माताहरु गम्भीर हुनुपर्छ ।
काठमाडौंमा के मोनोरेलको टिकट सस्तो होला त ?
सस्तो त बनाउने किन नबनाउने भन्ने कुरामा भर पर्छ । मोनोरेलमा सरकारले सधै अनुदान दिइरहनु पर्ने हुन्छ । सरकारी अनुदान दिएर सस्तो बनाउने हो भने टिकट सस्तो हुन्छ । अनुदान नदिने हो भने महँगो हुन्छ । टिकटको पैसाले मोनोरेल चलाउने नसोचे पनि हुन्छ । जर्मनीमा राज्यले ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । प्रागमा ७० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । सेवा दिने अभिप्रायले रेल चलाउँदा त यात्रु नभएको बेला पनि चलाउनु पर्छ । दिउँसो वा राति वा बिहानै दुई चार जना पनि बोकेर दौडिनु पर्ने हुन्छ । निजीहरुले यात्रु नभएसम्म चलाउँदै नचालाउने, कोचेर चलाउने, यात्रु नहुने समयमा बस नै नचालाउने गरेका कारण नाफामा गएको हो । अन्यथा पब्लिक बस वा रेल कतै पनि नाफामा जाँदैनन् । सरकारले अनुदान दिनै पर्छ ।
ट्रली बस बेचेर खानेले मोनोरेल नखालान् भन्ने के छ ?
निराशावादी मात्रै भएर भएन । किनभने हामीले त अगाडि बढ्नु पर्ने छ । ट्रली बस बेचेर खाए भन्दैमा सबै बेचेरै खान्छन् भन्ने कल्पना गर्नु हुँदैन । त्यो भएन, यो पनि हुँदैन भन्ने विन्दुुमा बसेर छलपल हुन हुँदैन । आशावादी भएर विकास निर्माणका कामहरु गर्दै जानु पर्छ । केहीमा असफलता हात लाग्यो भन्दैमा त्यस्तो हुँदैन । आज अफ्रिका पनि काठमाडौंभन्दा फार बेटर छ । सही मानिसलाई सही ठाउँमा राख्नुपर्छ । गलत व्यक्तिलाई सही पद दिनु हुँदैन । विदेशीले विकास गरिदेलान् भन्ने नसोचे पनि हुन्छ । विज्ञता किन्ने हो । सबै विज्ञ स्वदेशमै जन्मिन्छन् भन्ने कुरा छैन ।
पूर्वपश्चिम रेल त भौतिक निर्माणमै गइसकेको छ । केही कुराहरुको भने सम्भाव्यता भने राम्रो हुनुपर्छ ।
मोनोरेल आशिष गजुरेल
बजेटका लागि अर्थ समितिको २२ बुँदे सुझाव